Ndezvipi Vatengesi Vanofanira Kuziva Nezve HTML5 | Martech Zone
Muvhuro, July 2, 2012 China, June 18, 2015 Douglas Karr
HTML5 inobata yakawanda yevimbiso yekuita kuti zvirimo zviwanikwe pane chero chinhu chinogoneswa newebhu-… kana vanhu vakagadzirisa mabhurawuza avo kushanduro dzichangoburwa. Mubvunzo ndewekuti inguva yekuti sangano rako ritange kuvandudza masaiti ako muHTML5 uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kutora mari yekuita kudaro. Uberflip yaisa pamwechete matanho akakodzera paHMTL5 kubatsira vashambadziri mukuita sarudzo iyi.
Key kutora nguva:
HTML5 inopa vatengesi kugona kuendesa zvemukati pamapuratifomu akawanda (desktop, piritsi, smartphone) nemutengo wakaderera zvikuru.
Seye browser-based tekinoroji, HTML5 webhu maapps anogona kuvakwa kamwe uye kumhanya pane chero chishandiso. vangangoita 70% yemabhurawuza anotsigira uyu mutauro wechirongwa.
HTML5 zvishandiso zvinopa chinenge chiyero chakaenzana chekudyidzana uye maitiro-akafanana nemaitiro seakazvarwa maapp
HTML5 iri kushandiswa neinenge 50% yevagadziri, uye inofungidzirwa kuti ichakura kusvika ku80% mukati memakore matatu anotevera